Saturday December 05, 2015 - 04:56:17 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info - Dadka qaar ayaa Cabdikariim Xuseen Guuleed u heeysta inuu yahay shaqsi damiir dadnimo ama damqasho Galmudug leh hasse yeeshee sawirkaan wuxuu kuu sheegayaa qofka uu yahay Cabdikariim Dhegajuun. Dhiiga Halyeeyadii ay sida xaqdaradaa u leeysay Puntland ,badankoodna naftooda ku waayay iyagoo difaacayaan sharaftiisa oo qoyan ayuu farxad iyo dhoola cadeeyn la garab fariistay Madaxweynaha Puntland.
Marka sawirkaan laga qaadayo Cabdikariim Guled waxeey Ciidanka Puntland dileen allaha u naxariistee Dahir Akhwaan,waxeey dhaawaceen Xildhibaan Calool Geel.halka ay Isbitaalka yaaliin Saciid Dhagool iyo Cabdi Ciise oo dhaawacmay iyagoo difaacaya.
Galkacyo waxaa tiilay tacsidii Maxamed Xaashi Cigaal iyo halyeeyadii lala dilay ? laakiin sawirkaan wuxuu ka marqaati furay ineysan Cabdi Kariim tacsi u oolin.
Qof madaxiisa loo dhamaaday oo tacsi u taal haddii uu sidaas u qoslana waxaan ku tilmaami doonaa sheenaha cusub ee 2016.
Sikastaba ha ahaatee doqonka dantii loo soo diray ayaa uga muhiimsan cidkastoo la dilo laakiin waxaa ka doqonsan kuwii doortay iyo kuwa difaacay.